လူမှုကှနျယကျပျေါမှာ ဝဖေနျမှုေ တှမွငျ့တ ကျနတေဲ့ နဆေနျး ရဲ့ ဆုတောငျးစာ – Shwe Likes
ဖစျေ့ဘု တျဆယျလီေ နဆနျး ကတော့ ..သူမြားနဲ့မတူ တ မူထူးခွားတဲ့ ..ဟာသေ လးတှတေ ငျဆကျရငျးလူသိ မြားလာ ခဲ့တဲ့သူ တဈယော ကျပဲဖွဈ ပါတယျ။..
လှပတဲ့ မကျြနှာ အမူအရာ အပွောအဆိုတှေေ ကွာငျ့လူအ မြားရဲ့အားေ ပးမှုကို… ပိုငျဆိုငျထား သူ တဈယောကျ ပဲဖွဈပါတယျ။ ..ထို့ပွငျ နဆေနျး ကပရိသ တျတှေ အားပေးမှွုေ
ကာငျ့ ..ရရှိလာခဲ့ တဲ့ ဝငျေ ငှမြားဖွငျ့ ..သိနျးထောငျခြီ တနျသော အိမျကောငျးေ ကာငျးမှနျမှနျ.. ဆောကျလုပျ… နထေိုငျလာနို ငျလာခဲ့ ပါတယျေ နဆနျးက.. လကျရှိ မှာတော့ ..သူဝါသနာပါတဲ့ အလု ပျတှေ ကိုလုပျကိုငျရငျး ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကိုရရှိ ကာ.. အောငျမွ ငျမှုတှေ ရရှိဆှတျ ခူးနပွေီပဲ ဖွဈပါတ ယျ။.. နဆေနျးကလညျး
သူ့ရဲ့အ လုပျကို.. အာဏာသိမျးခံ ထားရခြိနျေ တာငျမှ . ဂရုမစို ကျပဲ အလုပျတှေ ဆကျလကျ လုပျဆောငျနတောကွောငျ့ ပွညျသူမြားရဲ့ …အွ ပဈတငျ ဝဖေနျမှုကို လဲ.. အပွငျးအ ထနျ ခံနရေ ပါတယျ…
အဲဒီနောကျပိုငျး မှာတော့ နဆေနျးက ဘယျ ဘကျကိုမှ ရဲရဲဝငျ့ဝငျ့ရပျတ ညျလာခွငျးမရှိ တာကွောငျ့ … နဆေနျးနှငျ့ ပတျသတျ သညျ့ ကွျေွာ ငာမြားရိုကျကူး ထား သညျ့ လုပျငနျးရှငျမြားက နဆေနျးနဲ့ပကျ သကျတဲ့ လုပျငနျးမြားကို ရပျဆိုငျးပဈရတဲ့အထိ ဝဖေနျခံခဲ့ရ ပါသေးတယျ။
အဲနောကျပိုငျး မှာတော့ နဆေနျးက ပရိသတျ မြားအပျေါမထိမဲ့မွငျေ ရးသားခြ ကျတှကွေောငျ့ အပွငျးအထနျဝဖေနျခံရပွီးနောကျ ပိုငျးမှာတော့နေဆနျးတဈယောကျ ပရိသတျတှေ ကို ပွနျလညျတော ငျးပနျစာ ရေးသား လာခဲ့ပါတယျ။
ခုနောကျပို ငျးတှမှောေ တာ့ နဆေနျးတဈယော ကျဖဘေု့တျစာမြ ကျနှာကနေ ပြောကျကှ ယျနပွေီး Instagram မှာပဲ ပြျောနတော ဖွဈပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာေ တာ့ နဆေနျးက သူတျောေ ကာငျးတှမေို့ နတျကော ငျးနတျမွတျမြား စောငျ့ရှောကျပေးပါဘုရားဆိုပွီး ရေးသား
လာခဲ့ပါတယျ။ နဆေနျးရေးသား ထားတဲ့အော ကျမှာတော့ ပရိသ တျတှကေ ကွားကနေ တညျ့တညျ့လေး သခြောထိုငျထားနျော. ဆိုပွီး ရေးသားခဲ့ကွ ပါသေး တယျ။
ပရိသတျကွီး လညျး နဆေနျးရဲ့ဆုေ တာငျးစာလေးက ဘယျသူေ တှဘကျကို ဆုတောငျးေ ပးတယျလို့ ထငျတယျဆိုတာကိုလညျး ရေးပေးသှားခွဲ့ ကပါအုံးနျော…
ဖေ့စ်ဘု တ်ဆယ်လီေ နဆန်း ကတော့ ..သူများနဲ့မတူ တ မူထူးခြားတဲ့ ..ဟာသေ လးတွေတ င်ဆက်ရင်းလူသိ များလာ ခဲ့တဲ့သူ တစ်ယော က်ပဲဖြစ် ပါတယ်။..
လှပတဲ့ မျက်နှာ အမူအရာ အပြောအဆိုတွေေ ကြာင့်လူအ များရဲ့အားေ ပးမှုကို… ပိုင်ဆိုင်ထား သူ တစ်ယောက် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ..ထို့ပြင် နေဆန်း ကပရိသ တ်တွေ အားပေးမှြုေ
ကာင့် ..ရရှိလာခဲ့ တဲ့ ဝင်ေ ငွများဖြင့် ..သိန်းထောင်ချီ တန်သော အိမ်ကောင်းေ ကာင်းမွန်မွန်.. ဆောက်လုပ်… နေထိုင်လာနို င်လာခဲ့ ပါတယ်ေ နဆန်းက.. လက်ရှိ မှာတော့ ..သူဝါသနာပါတဲ့ အလု ပ်တွေ ကိုလုပ်ကိုင်ရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကိုရရှိ ကာ.. အောင်မြ င်မှုတွေ ရရှိဆွတ် ခူးနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတ ယ်။.. နေဆန်းကလည်း
သူ့ရဲ့အ လုပ်ကို.. အာဏာသိမ်းခံ ထားရချိန်ေ တာင်မှ . ဂရုမစို က်ပဲ အလုပ်တွေ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေတာကြောင့် ပြည်သူများရဲ့ …အြ ပစ်တင် ဝေဖန်မှုကို လဲ.. အပြင်းအ ထန် ခံနေရ ပါတယ်…
အဲဒီနောက်ပိုင်း မှာတော့ နေဆန်းက ဘယ် ဘက်ကိုမှ ရဲရဲဝင့်ဝင့်ရပ်တ ည်လာခြင်းမရှိ တာကြောင့် … နေဆန်းနှင့် ပတ်သတ် သည့် ကြော်ြ ငာများရိုက်ကူး ထား သည့် လုပ်ငန်းရှင်များက နေဆန်းနဲ့ပက် သက်တဲ့ လုပ်ငန်းများကို ရပ်ဆိုင်းပစ်ရတဲ့အထိ ဝေဖန်ခံခဲ့ရ ပါသေးတယ်။
အဲနောက်ပိုင်း မှာတော့ နေဆန်းက ပရိသတ် များအပေါ်မထိမဲ့မြင်ေ ရးသားချ က်တွေကြောင့် အပြင်းအထန်ဝေဖန်ခံရပြီးနောက် ပိုင်းမှာတော့နေဆန်းတစ်ယောက် ပရိသတ်တွေ ကို ပြန်လည်တော င်းပန်စာ ရေးသား လာခဲ့ပါတယ်။
ခုနောက်ပို င်းတွေမှာေ တာ့ နေဆန်းတစ်ယော က်ဖေ့ဘုတ်စာမျ က်နှာကနေ ပျောက်ကွ ယ်နေပြီး Instagram မှာပဲ ပျော်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာေ တာ့ နေဆန်းက သူတော်ေ ကာင်းတွေမို့ နတ်ကော င်းနတ်မြတ်များ စောင့်ရှောက်ပေးပါဘုရားဆိုပြီး ရေးသား
လာခဲ့ပါတယ်။ နေဆန်းရေးသား ထားတဲ့အော က်မှာတော့ ပရိသ တ်တွေက ကြားကနေ တည့်တည့်လေး သေချာထိုင်ထားနော်. ဆိုပြီး ရေးသားခဲ့ကြ ပါသေး တယ်။
ပရိသတ်ကြီး လည်း နေဆန်းရဲ့ဆုေ တာင်းစာလေးက ဘယ်သူေ တွဘက်ကို ဆုတောင်းေ ပးတယ်လို့ ထင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ရေးပေးသွားခြဲ့ ကပါအုံးနော်…
သံဃာေ တျာေ တှကို မစျောကား သငျ့ကွောငျး ခုခြိနျမှတှငျတှငျွေ ပာနတေဲ့ လူ တဈခြို့အား စကားလုံးလှ လှလေး တှနေဲ့ ပွနျလညျ ခပြေပွောဆိုလိုကျတဲ့ မငျးမျောကှနျး